चलचित्र क्षेत्रलाई रक्षा गर्ने गरी कानुन आउँने मन्त्री बाँस्काेटाको दाबी — देश Bishwa Ghatana
चलचित्र क्षेत्रलाई रक्षा गर्ने गरी कानुन आउँने मन्त्री बाँस्काेटाको दाबी
२३ भदौ २०७६ काठमाडौँ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एबम प्रबक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई रक्षा गर्ने गरी चलचित्रसम्बन्धी कानुन आउन लागेको नेपाल चलचित्र कलाकार संघको ३२ औं स्थापना दिवस तथा ‘कलाकार र सामाजिक दायित्व’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बताउनुभएको छ ।
उक्त कार्यक्रमलाइ सम्बोधन गर्दै मन्त्रि बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “कानुन अवश्य आउँछ, जसले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई रक्षा गर्ने तह छ, त्यही उपाय सोचेर अवश्य आउँछ । त्यसमा तपाईहरुलाई सफलता मिलोस् ।
” उहाँले चलचित्र हलमा राष्ट्रिय गान बजाउने विषयमा अनावश्यक रुपमा गरिएको नकारात्मक बहसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जुन देशमा बाँचेका छौ, त्यो देशको राष्ट्रिय गान गाउने विषयमा पनि बहस गर्ने हो भने हामी राष्ट्रवादी हौं कि अरु नै केही हौं ? सोच्नु पर्यो ।” उहाँले भन्नुभयो, “गान राख्ने कि नराख्ने छलफल गरौंला तर नकारात्मक बहस गर्ने कुरा राम्रो होइन ।”
उहाँले फुटबल ग्राउण्डमा राष्ट्रिय गान बज्दा खेलाडी उठ्ने गरेको प्रसङ्ग चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “खेलमैदानमा खेलाडी उठ्दैनन् ? दृढ इच्छाशक्ति प्रकट गर्दैनन् ? राष्ट्रिय भावना प्रकट हुँदैन त्यहाँ ?” उहाँले थप्नुभयो, “तर हामी यति बहकियौं कि कसैले बचाउनै नसक्ने गरी बहकियौं । त्यस खालको कुरा चलचित्र क्षेत्रमा नहोस् ।” उहाँले नेपाली चलचित्रकर्मको विकासका लागि चलचित्र क्षेत्र सम्बद्ध सबै पक्षसँग सहकार्य र सहयोग तयार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले चलचित्र क्षेत्रलाई पनि सामाजिक सुरक्षाभित्र ल्याइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चलचित्र खेलेर घाइते भएपछि सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्ने हो ? सामाजिक सुरक्षाभित्र यो पनि आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “लगानीकर्ताहरु नहच्किनुहोला । हल मालिकहरुलाई पनि बधाई छ ।
हल मालिकहरुले नेपाली चलचित्रलाई प्रोत्साहित गर्नुस् । लगानीकर्ताहरुले आफ्ना कलाकारहरुलाई रक्षा गर्नुस् । सरकारले होस्टेमा हैंसे गर्छ ।” कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले नेपाली राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगको विकासका लागि बोर्ड प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा बरिष्ठ चलचित्रकर्मी नीर शाहले चलचित्र उद्योगको विकासका लागि स्वनियमन, अनुशासन र राष्ट्रिय भावना आवश्यक हुने बताउनुभयो । नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काको सभापतित्वमा सोमबार सम्पन्न कार्यक्रममा डा.घनश्याम खतिवडाले ‘कलाकार र सामाजिक दायित्व’ विषयक अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
Pakistan U19 vs Kuwait U19live cricket match score
Nepal, China Sign Three Agreements On Bilateral Co-operation